Maitiro Ekushambadzira Kwemagariro Evanhu Anokwira Nekushambadzira Kwechivanhu Martech Zone
Svondo, June 22, 2014 Muvhuro, October 12, 2015 Douglas Karr
Ini handipikisane zvachose kushambadza uye kubhadhara kukwidziridzwa, asi vazhinji varidzi vemabhizinesi uye kunyange vamwe vashambadzi havasiyanisi mutsauko. Kazhinji, kushambadzira munharaunda kunoonekwa seimwewo mugero. Kunyange iri zano rekuwedzera rekushambadzira kwako, zvemagariro zvinopa mukana wakasiyana zvakanyanya.
Zvemagariro midhiya zvave zvichikanganisa kushambadzira nzvimbo kubva payakatanga kupaza nzvimbo uye ndokupa trackable metric iyo vatengesi vaingorota nezvayo. Nemutengo wakawandisa weGC uri kuburitswa zuva nezuva, hapana mubvunzo kuti kushambadzira munharaunda inzira yakakosha yekushambadzira yakanangwa, inotungamira-chizvarwa uye nzira mbiri dzekuita. Brightkit, Maitiro Ekutyaira kukosha neSocial Kushambadzira
Kushambadzira kwakanyanya zano rekuziva, kwete chirongwa chehukama. Ini handikwanise kupindura ndakanangana neterevhizheni kana redhiyo kushambadzira… kana kunyangwe dhijitari kushambadzira online. Asi ini ndinogona kuita, echo kana kupindura kushambadziro yemagariro. Zvemagariro enhau zvinopa nzira dzinoshanda kwazvo uye dzinoshanda dzekubatsira kushambadzira kwemuromo munhoroondo - uye kambani yako inofanirwa kunge iri kupinda mairi. Zvakare, kana mushandirapamwe wako mari yaoma, saizvozvowo kushambadza kwako. Asi zvemukati zvakagovaniswa pasocial media zvinogona kugara kwemakore.
Tags: kunzwisisa kwevatengimapuratifomu edhijitarieFacebookgoogle adsInstagramrevatema kushambadziramutungamiri wechizvarwakushambadzira kukwikwidzakusvika kwakawandazviyero zvinoyerwaPinterestseozvinogovaniswa zvemukatikushambadzira kwevanhuyemakwikwi ekushambadzira munharaundakusvika munharaundayakanangwa kushambadzakushambadzira kwechinyakareTwitternzira mbirizvemukati zvemukatiinodziya lead lead
Iyo Yazvino Mamiriro Ekushambadzira Zvemukati 2014